Kadib markii Maxaakimtii baxeen, reer Xamar, maxay dowlada ugu soo dhaweeyeen boob iyo bililiqo?
Sheikh Abdiraxmaan Maxamed Jibriil,
Isla markii ciidamadii Maxaakimtu jabeen, maxay reer muqdisho ugu soo kacday shahwadii kufsiga, bililiqada iyo boobka oo ay illaaween muddo 5 bilood ah oo maxaakimtu ka talinayeen Muqdisho?
Isbadalada iyo dhacdooyinka Soomaaliya waa kuwo aan la saadaalinkarin. Isbadalkii waynaa ee taariikhiga ahaa ee warlordskii Muqdisho loogasaaray, dakadii iyo garoonkii caalamiga ahaa lagu furay, aammaankii iyo kala danbayntii lagu sooceliyay, guryihii iyo hantidii lagukala qabsaday dagaaladii ahliga ahaa la isugu celiyay waxay ahayd wax aan cid saadaalisay iyo cid ku fikirtay midna aysan jirin. Xattaa marka lagu daro kuwii sameeyay ee guushaas gaaray. Si fudud wixii ku yimaada si fudud ayay kutagaan.
Sidoo kale, xoogii layaabka lahaa ee Maxaakimta Islaamiga ah ee wadanka inta badan si fudud gacanta ugu dhigay, dawlado badan iyo dadbadana taageereen, isla markaasna lagu tuhmayay diin iyo ikhlaas inay sadex maalmood kujabaan, isla markaasna ay ka baxaan magaalo madaxdii muqdisho oo la islahaa waxay ku dagaalamayaan bilo iyo bilo, waa wax aan la filayn. Malaha Ilaahay wuxuu rabaa inuu insaanka tuso in kaligi ogyahay waxa dhicidoona iyo sida ay u dhacayaan, inuuna u doortay Soomaaliya meesha uu ku soo bandhigayo arrintaas.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan kusoo bandhigaynaa halkaan laba su�aalood oo muhiin ah. Midda koowaad; Maxay reer Muqdisho u bilaabeen boobka iyo bililiqada markii la jabiyay ciidankii Maxaakimta? Su�aasha labaad; Haddii Maxaakimtii meesha ka baxeen Dawlada kumeel gaarka Soomaaliya iyo bulshada caalamku ma soo celinkaraan nidaamkii iyo ammaankii ka jiray Muqdisho mudadii Maxaakimtu ka talinaysay? Haddii aysan soo celinkarin waayo?
Caqliga iyo sharcigu waxay keenayaan in reer Muqdisho u baroortaan oo difaacaan, wanaagii, nadabadii iyo kala danbayntii ay heleen mudadii Maxaakimtu ka talinaysay Muqdisho. Halkii taas laga filayay, waxay u qalab qaateen boobkii iyo isbaaradii inay soo celiyaan. Waxaa dadka qaar u fahmi karaan in dadkaasi rabeen xumaantii hore ee dadka inta lafduubo lakala gadanayay, oo ay Xamar caanka ku noqotay inay yiraahdaan �War gacanta hore ka gaara� Gacanta hore ka gara macnaheedu waxaa weeye, qofka marka la afduubo, qolada afduubtay, waxay ku gadayaan qiimo jaban. Tusaale ahaan waa sidaan: Markay qabsadaan qofka waxay ku baayacayaan $15000. Mudo yar ka dib waxaa imaanaya kuwo kale oo aan ahayn kuwii markii hore qofka afduubay, waxay oranayaan annaga ayaa ini siinayna $15000. Kadib markay qofkii qaataan, waxay ku baayacayaan $25000. Kuwo kale ayaa imaanaya. Waxay ku baayacayaan $35000. Sidaas ayay ahayad qisada Muqdisho Maxaakimta ka hor. Reer Muqdisho ma taas ayay u xiiseen?
Markaan oo kale, waxaa fudud in dhalinyaro badan ay u daliilsadaan arrintaan in dadkaani gaalo shar iyo xumaan u banbaxday ay yihiin, loona baahanyahay in loola macaamilo sida gaalada ama ka daran. Laakiin fahamkaasi sax maha ee waa jawaabta fudud ee su�aasha, taas oo ay isticmaalaan kuwa ka wahsada cilmiga iyo baarida arrimaha xididadooda. Fahamkaasi waa khada waana ka digayaa.
Aniga sida ay ila tahay, waxa ka dhacay Muqdisho iyo sida ay u dhaqmeen reer muqdisho, waxaa ku sugan darsin loo baahanyahay inay bartaan dadka ka shaqaynaya oo isku howlaya arrimaha bulshada. Cibro wayn iyo caqli badan ayaa laga qaadan karaa arrintaas. Arrintaasi waxay kuu tilmaamaysaa meesha cudurku ku jiro iyo cidda jiran. Waxaad ogaanaysaa dadka aad rabto inaad wax u qabato, diin ku xukunto, dowlad ka dhigto waxa ayyihiin iyo sida ay wax ukala doortaan.
Waxaad ogaanaysaa inaysan mushkuladu ahayn qofofka, sida Siyaad Bare, Caydiid, Cabdulahi yuusuf, Qanyare, Yalaxow iyo wiixi la mid ah. Waxaad ogaanaysaa in ragaasi ahaayeen ama yihiin hogaamiye yaashii bulshada Soomaaliyeed. Laakiin waxa jiran oo daawada u baahan inay yihiin mujtamaca laftigiisa. Haddii aan si kale u iraahdo, dhibta ummadaani ma aha hogaamiye yaasha ay leeyihiin ee waa ummada lanteeda. Waxaa loo baahanyahay inaan wakhti la isaga qaadin eedaynta iyo baasaysiga shakhsiyaadka ee la fahmo meesha sartu ka quruntay oo ah mujtamaca naftiisa. Had iyo jeer mushkuladaas, waa la iska indhatiraa waana laga wahsadaa oo waxaa la isku dayaa in lahelo wado gaaban oo dawlad lagu noqdo oo wanaag aan bulshada ka imaan lagu helo.
Marka aad haysatid ummad wax garad ah oo danteeda garanaysa, hogaamiye wax kaa dhimi kara ma jiro. Hogaamiyuhu wuxuu ka yimaadaa mujtamaca. Haddi mujtamacu yahay jaahil, mooryaan ah, waxaa ka soo dhexbaxaya mid mooryaan ah. Haddii mujtamacu yahay mujtamac wanaagsan, wax bartay, dhaqan fiican iyo akhlaaq wanaagsan leh ma aqbalayo xumaan badasha dhaqankooda iyo diintooda. Laakiin Mujtamaca aad hadda haysato waa kaas, markii u maqlay ciidamadii maxaakimta waa laga adkaaday, isla markiiba u dhaqaaqay boobka iyo bililiqada. Waa mujtamac jiran. Wuxuu u baahan yahay in la daaweeyo, wax la baro, aan laga wahsan, wakhti iyo maal lagaliyo. La sifeeyo dhaqanka iyo akhlaaqada mujtamaca.
Dadka maanta doorashadoodii sidaas noqotay, maxay macnaa oo samaynaysaa inaad ku tiraahdin doorasho siyaasadeed gala oo madaxwayne iyo baarlamaan doorta. Arrinta Xamarka ka dhacday iyo sida shacabku uga jawaabay jabkii ciidamada Maxaakimta loogaystay, waxay tusinaysaa inaan shacabkaani joogin heer garasho oo ay ku kala doortaan sharka iyo khayrka ama ay ku fahmaan sidii ay u noolaan lahaayeen.
Sidaas daraadeed, qofkii raba inuu dadkaan wax u qabto waa inuu badalo nafsiyaadkooda, oo intuu ka daadiyo waxa xun ee ka buuxa uu ku shubo wax fiican iyo akhlaaq bilaa�aadanimo. Shacabka Soomaaliya wuxuu u baahanyahay in la soo gaarsiiyo xad bilaa�aadanimo inta aan wax kale lagu fikirin. Dawlad, nabad, dhaqaale, horumar waxaa sameeya dad sharka iyo khayrka kala dooran kara oo dantooda garan kara. Dadkaani majoogaan heerkaas. Waxaa loo baahanyahay in la isku mashquuliyo, wakhti badana lagu bixiyo sidii dadkaan looga dhigi lahaa dad bilaa�aadan ah oo dantooda garan kara. Taasi wax sahlan oo iska imaanaya ma aha ee waa wax u baahan wakhti iyo dadaal dheeraad ah.
Shacab akhlaaqda iyo caqliga ka aradan ee aan qiyam bilaa�aadanimo lahayn, wuxuu u baahan yahay in dhaqancelin lagu sameeyo oo wax la baro. Diinta Islaamka ee aan doonayno inaan ku xukuno dadkaan, waa inay ka bilaabato quluubtooda iyo naftooda dhexdeeda. Waa inay ka muuqato akhlaadii iyo dhaqankii islaam lagu yaqaanay. Waa inay u qaataan dhaqan ahaan iyo asluub ahaan. Haddii taas la waayo, waa in marka hore wax la baraa oo wakhti loohuraa ayada oo aan lagu dagdagin xukun iyo maamul.
Su�aasha labaad ee ah Dawlada kumeelgaarku ma soocelinkartaa ammaanka iyo nabada?
Way dhici kartaa oo mustaxiil ma ah, laakiin aniga waxay ila tahay maya. Masoocelin karaan ammaankii iyo kala danbayntii ka jirtay Muqdisho.
Dadwaynaha reer Muqdisho ee bilaabay bobka iyo bililiqadu waxay ka jawaabayeen ruuxda iyo akhlaaqda ciidanka guulaystay. Waxay u sii dhaqmeen sidii laga filayay iyo timaamihii ay la haayeen ciidanka guulaystay ee soosocda. Wanaagii iyo kala danbayntii keentay, in la furo dakada iyo garoonku waxay ahaayeen akhlaaqdii iyo dhaqankii ciidankii jabay ee laga adkaaday. Hadii ciidankii Maxaakimtu tagay oo laga adkaaday, ruuxdii Islaamiga ahayd ee Muqdisho maamulaysay, caddaladii iyo sinaantii waa inay tagtaa.
Mas�aladu ma�aha xooga iyo hantida, ee waa ruuxda iyo akhlaaqda. Ciidanka xooga badan ee jabiyay Maxaakimtii kama saari karo qabiilka mar labaad qabsaday garoonka iyo dakada, maxaa yeelay ruuxda iyo akhlaaqda uu xanbaarsanyahay ayaa ah mid la mid ah tan uu xanbaarsanyahay kan haysta garoonka iyo dakada. Inta hadda ka sii muuqata waa raadkii Maxaakimta, laakiin mustaqbalka dhow, waa Muqdisho xukumi doona ruuxda ciidanka qabsaday ee ay ka mid yihiin kuwii horay looga saaray Xamar.
Ruuxdii caddaalada iyo nabadu way jabtay. Ciidankeedii waa tagay. Ciidanka xooga badan ee hadda qabsaday Xamar, ha ku soo dhawaado dhaqan iyo afcaal waa faqsan ruuxda uu xanbaarsanyahay oo ah, dil, kufsi, jidgooyo iyo biliqo. Sidaas daraadeed suuro gal ma�aha in dowladu sugto amniga Muqdisho ayada oo adeegsanaysan ciidan iyo lacaq. Sidoo kale caalamka kale waxba kama qabankaro fowdada Xamar. Dagdheer dhimatoo dhulkii waa nabad.